Nhau - Ungasarudza sei zvishongo pamusangano wegore?
Kana Mutambo weChirimo uri kuuya, chii chichatumirwa kuTA kumuita kuti afare uye kunyemwerera mumaziso ake? Lingling anokuudza kuti dombo rematombo rakaringana. Zvinorehwa nezvishongo zvakasiyana zvinomiririra akasiyana rudo mazwi akavanzika. Iwe unogona here kuudza kana TA inogona kufungidzira kurudyi?
Mhete - Rudo
Ndeupi musikana asingade kudanana? Inguva yakakodzera, tumira iye akanyatsosarudzwa mhete. Kunze kwekunyepedzera "kudonha murudo," chishongo chine zvakare chimwe chidimbu cherudo, "Ini ndinongoda kusunga moyo wako zvine simba nehuro kwete kutorwa nevamwe vanhu." Kuzivisa kwakadaro kwakasimba uye kunodzvinyirira kunozofadza moyo wake.
Crystal epinki poda inotapira uye isina mafuta, sehukama hunotapira pakati pevaviri, pane yakanaka maruva-inoenderana, kristaro Jade uyu mosaic jade mhete dzakatevedzana akakodzera kwazvo musikana.
Ndeapi vasikana vasingade kuva nerudo rwusingaperi? Pamwe chinzvimbo chake mumoyo mako hachikwanisiki, uye manzwiro ako akakomba uye ane hanya. Nekudaro, iwe unofanirwa kutaura iwe pachako, muite kuti azive, uye rega iye anzwe akasununguka. Mutumire bracelet, zvinoreva kuti "chengetedza rudo," achiratidza chishuwo chake chekumusunga kweupenyu hwese uye kushandisa hupenyu hwake hwese.
Zvirinani kumutumira sekristaro amethiste rundarira, amethiste ndiyo "mutariri wedombo rerudo", zvichireva yakanaka, yakapusa uye inochinja dhizaini, saka iye akanaka uye akanaka.
Mhete - Ring yeRudo
Ndeupi musikana asingade kuwana kuzvipira kwehupenyu hwese? Kana ari iye chete munhu waunoda kuti "urambe wakaisa munwe wako pauri, ramba wakura," usamurega akamirira kwenguva refu, mupfekedze mhete, uye utaure kutaura kwake kwechokwadi uye kwechokwadi "kumuda. Nechemumoyo mangu, ndinenge ndakazvipira kufira rudo rwake, ”ndichimupa muchato unofadza.
Pfeka kristaro Ruby yakaita-semhete mhete, kubva ipapo kubvumirana kune mumwe nemumwe rudo uye kuzvipira.
Mutambo, tumira kwaari kristaro yemweya wedombo anokosha
Zvipo zvakanaka uye zvine chinangwa
Zvakakosha kumuita kuti afare
Chii chakakodzera kupfuura ichi?